Agaasimihii idaacadda Shabeelle Xassan Cismaan Cabdi ?Fantastic? oo caaw lagu dilay Muqdisho iyo raggii falkaasi gaystay oo baxsaday. – Radio Daljir
Agaasimihii idaacadda Shabeelle Xassan Cismaan Cabdi ?Fantastic? oo caaw lagu dilay Muqdisho iyo raggii falkaasi gaystay oo baxsaday.
Muqdisho, Jan 28 ? Waxaa caawa fiidkii magaalada Muqdisho lagu dilay agaasimihii idaacadda Shabeelle Xassan Cismaan Cabdi ?Fantastic?, xilli uu ku sugnaa meel wax yar u jirta gurigiisa.
Dilka alle ha u naxariistee agaasime Fantastic, waxaa gaystay dhawr nin oo sida la sheegay baskoolado ku hubaysnaa, kuwaasi oo markii dambana baxsaday sidaasina waxaa Radio Daljir u xaqiijiyeen qaar ka mid ah hawl-wadeenna idaacadda Shabeelle oo aan la xiriirnay.
Dilka wariyuhu, waxaa uu ka dhacay xaafadda Dharkaynley ee gobolka Banaadir halkaasi oo uu ku yaallay gurigiisu. Marxumka ayaa ku nafbaxay isbitaalka kaddib markii la gaarsiiyey isagoo qaba dhaawac aad u halis ah sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee Isbitaal Madiina
Ma cadda illaa iyo haatan cidda falkaasi gaysatay iyo jihada ay ka soo jeedaan, waxaana sidoo kale wali aan iftiinsanayn sababto dilkiisu la xiriiro. Warbaahinta Soomaalida ayaa si aad ah u dhaleecaysay falkaasi, kuna tilmaantay mid arxan-darro ah oo lala beegsaday wariye si caadi ah u gudanayey hawlihisii shaqo.
Degmada Dharkaynley ee dilkaani uu ka dhacay waxaa gacanta ku haysa dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, mana jirto illaa haatan tallaabo xagga dawladda ka timid oo lagu qabanayo dadkii falkaasi gaystay.
Ma ahan markii ugu horraysay oo sidaan oo kale dil toogasho ah magaalada Muqdisho loogu gaysto mas?uul ka tirsan idaacadda Shabeelle, waxaana horay loo dilay agaasimihii idaacaddaasi Muqtaar Maxamed Hiraabe.